Knowledges Archives - ReaderGonnaRead
တကယ်တော့ လူအများစု အပါယ်ကျကြရတာဟာ အပိုလောဘကြောင့်ပါ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းက တကယ့်ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုကို ပြောပြဦးမယ် ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်က လူအများစုနဲ့ သိကျွမ်းတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့မြေကို အုပ်တံတိုင်းခတ်တဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်မြေကွက်က မြေနှစ်ပေလောက် ခိုးယူထားလိုက်တယ်။ သူက အရင်ရောက်တာလည်းဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလူတွေနဲ့လည်း သိနေတာဆိုတော့ နောက်မှရောက်လာတဲ့ တစ်ဖက်မြေကွက်ရှင်ဟာ ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ဒီအတိုင်းနေတယ်။…
ယခုတင်ပြသည့် အချက်များအား ဆရာကြီး ဦးမြစိန် ရေးသားသည့် မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ ( (၁၃) ကြိမ် မြောက် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ထုတ်ဝေခြင်း) မှ မှီငြမ်း၍ အများသူငှာသိစေရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ လင်ခန်းမယားခန်း ပြတ်စဲရန် အဓိကအကြောင်း ၃ မျိုးရှိပေသည် ။ ၎င်းတို့မှာ ၁။…
ဧရာဝတီမြစ်ကိုကား ယေဘုယျအားဖြင့် ယူနန်ပြည်၏ အရေးပါသော ထွက်ပေါက်လမ်းမကြီးအဖြစ် လက်ခံထားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤမြစ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် စူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ အချိန်ကာလအထိ ဧရာဝတီမြစ်၏ အထက်ပိုင်းကို မည်သူမျှ မသိကြသေးပေ။ အတိအကျ ပြောနိုင်သည်ကား ဗန်းမော်မြို့ အထိသာ ဧရာဝတီမြစ်ကို သိရှိသေးသည်။…
(၁) လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန်နည်းလမ်း(၅)သွယ် 1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ 2. ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။…
mrminyan August 2, 2019
ခေါင်းမာတဲ့ကလေးတွေကို ပြောဆိုဆုံးမရတာဟာ အိပ်မက်ဆိုးမက်နေသလိုပါပဲ။ ပြောလို့လည်းမရ၊ ညှိနှိုင်းလို့လည်းမရနဲ့ ရိုက်ပစ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အထိပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းမာပြီးပြောရခက်တဲ့ကလေးတွေဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ တခြားသူတွေထက် အောင်မြင်နိုင်ချေပိုများတယ်ဆိုတာ ResearchGate , မှာဖော်ပြထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ သိခဲ့ရတာကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ဒီလိုကလေးတွေအတွက် သိပ်စိတ်ပူဖို့မလိုတော့ပါဘူးနော်။ တွေးခေါ်စွမ်းရည်ကောင်းကြတယ် ကလေးဘဝမှာ လူကြီးတွေပြောတဲ့စကားကို လွယ်လွယ်နားမထောင်တတ်တဲ့ကလေးတွေမှာ ကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ငယ်ကတည်းက အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်စပ်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အစွမ်းအစရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုကလေးတွေက အတန်းပညာသင်တဲ့အခါ ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲတတ်ပေမယ့်…
FAလေးတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့်ဘ၀ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး
ချစ်သူမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အထီးကျန်တာတွေ၊ အားငယ်တာမျိုးတွေ ခံစားမနေသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သင်တစ်ယောက်တည်းလည်း ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်လို့ပါပဲ။ အချစ်ဆိုတာ လိုက်ရှာနေရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်တန်တဲ့အခါ သူ့အလိုလိုရောက်လာတာမျိုးပါ။ ဒါကိုနားလည်ပြီး အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁)…
ငါးမျှားနေသော ရဟန်း နှင့် သင်္ကန်းလှူသော မင်းကြီး
ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး တိုင်းခန်းလှည့်​လည်လာတဲ့ အချိန်မှာ ရေကန်ထဲမှာ ငါးမျှားနေတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကိုတွေ့တယ်. ရဟန်းက ဘုရင်ကိုလည်း မြင်ရော ငါးမျှားတံကို ဘေးချပြီး ပုတီးစိပ် နေတယ် နန်းတော်ပြန်ရောက်တော့ ဘုရင်က အမတ်ကြီးကိုအဲဒီရဟန်းတော်ထံ သင်္ကန်းတစ်စုံ လှူခိုင်းတယ်. အမတ်ကြီးလည်း ရောက်ရော ရဟန်းက ငါးမျှားနေတာတွေ့တော့သင်္ကန်းမလှူဘဲ ပြန်လာပြီး ဘုရင်ကိုလျှောက်တယ် ဘုရင်က…
ပျော်ရွှင်သောဘဝနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ ချစ်သူလေးကို တစ်နေ့ ၈ ကြိမ်ပွေ့ဖက်ပေးပါ
mrminyan August 1, 2019
ပျော်ရွှင်စေနိုင်ခြင်း ပွေ့ဖက်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုခံစားစေတဲ့ oxytocin နဲ့ serotonin ပမာဏအတန်အသင့် ထုတ်ပေးပါတယ်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပါရဂူ ပေါလ်ဇက်က ပိုမိုပျော်ရွှင်သောဘဝနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အချစ်ရေးအတွက် တစ်နေ့ ၈ ကြိမ်ပွေ့ဖက်ပေးပါတဲ့။ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း ခဏခဏပွေ့ဖက်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟော်မုန်းတစ်ခုက စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့…
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့နောက်ဆုံး နေဝင်ချိန် ကျမှ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်တစ်ဦး
mrminyan July 31, 2019
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ကျမှ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ။ လူ့လောကမှာသူ့ကိုမွေးဖွားလိုက်ပြီး (၅) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူ့ဖခင်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ ဖခင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း သူ့မိခင်က အလုပ်ထွက်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ (၁၂) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူ့မိခင်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်။ သူ့ပထွေးရိုက်နှက်နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်ကို နောက်ကွယ်မှာခံခဲ့ရတယ်။ (၁၄) နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့ ကျောင်းတက်ဖို့လဲပိုက်ဆံမရှိ၊ မိဘအိမ်မှာလည်း မနေချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်…
mrminyan July 29, 2019
တချို့က ပြောကြတယ် ဘုန်းကံ မရှိလို့ သမီး မိန်းခလေး မွေးတာတဲ့ကျွန်မ တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးပေတေလေလွင့်ပြီး ဆိုးသွမ်းနေတဲ့သားတွေကို မွေးထားမိတဲ့ မိခင် တွေဆို ငါဟာမိန်းမမြတ်လို့ ဂုဏ်ယူနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး သား ယောက်ျားလေး မွေးရင် သာသနာဘောင် သွတ်သွင်းခွင့်ရမယ်ဆိုပြီး မြင့်မြတ်တဲ့မိခင်တွေလို့သတ်မှတ်ကြတာပါ။တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာ မြင့်မြတ်တယ် မမြင့်မြတ်ဘူးဆိုတာထက် သားယောက်ျားလေး ထက်…